Lumbar Disc Syndrome (ကျောရိုးအဆစ်ကျွံခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Lumbar Disc Syndrome (ကျောရိုးအဆစ်ကျွံခြင်း)
Lumbar Disc Syndrome (ကျောရိုးအဆစ်ကျွံခြင်း) ကဘာလဲ။
ကျောရိုးဆစ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ကျောကုန်းမှာ ရှိတဲ့ ကျောရိုးကြီးကို ဖြစ်စေတဲ့ အဆစ်ရိုးဖြစ်ပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ ဖော့ကဲ့သို့ အဆစ်ငယ်လေးတွေလဲ ခံထားပါတယ်။ ၎င်းအဆစ်တွေဟာ ကောင်းမွန်ကျန်းမာနေလျှင် ကျောရိုးအတွက် shock absorbers အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကျောရိုးကိုကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ အဆစ်တစ်ခုစီဟာ အကျယ် တစ်လက်မနှင့် အထူတစ်လက်မရှိတဲ့ အဝိုင်းပုံသဏ္ဍန်အတောင့်ပြားလေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာ ကြံ့ခိုင်တဲ့ အပြင်အမြှေး(the annulus fibrosus)နဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ အတွင်းအူတိုင်(the nucleus pulposus) ပါရှိပါတယ်။
ကျောရိုးဆစ်ထိခိုက်ခံရဖူးသူသာလျှင် ထိုထိခိုက်ခြင်းမှ ယူဆောင်လာတဲ့ ပြင်းထန်စွာနာကျင်စေမှုနှင့် ကူရာမဲ့ဘဝကို နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဟာ မချိမဆံ့ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Lumbar Disc Syndrome (ကျောရိုးအဆစ်ကျွံခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သင်ဟာ ကျောရိုးဆစ်ကျွံခြင်းကို သင့်ကျောရိုးရဲ့ မည့်သည့်နေရာတွင် မဆို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခါးအောက်ပိုင်း(ခါးဆစ်ရိုး)ကျွံတာအဖြစ်များပါတယ်။
ကျောအောက်ပိုင်းကို ရုတ်တရက် ပြင်းထန်တဲ့ အားစိုက်မှု သို့ ဖိအားတစ်ခု သက်ရောက်ခြင်း။ ရုတ်တရက် ခါးလိမ်သွားခြင်း သို့ နှာချေလိုက်ခြင်းကြောင့်တောင် အဆစ်ထဲကတစ်ချို့အရာတွေကို လွတ်ထွက်သွားစေပါတယ်။
ကြမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ရသောကြောင့် ကျောအောက်ပိုင်းကို ဒဏ်ပိစေတဲ့ အပြုအမူများ-မနိုင်ဝန်ထမ်းတတ်သောအကျင့်၊တုန်ခါမှုဒဏ်ကို ကြာရျည်စွာ ခံခြင်း၊နှင့် အားကစားဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခြင်းများ စသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကြောင့် အဆစ်အပြင်ဘက် အလွှာထူမှာ အနည်းငယ် ကွဲခြင်း သို့ အက်ခြင်းများဖြစ်စေပါတယ်။
-wear and tear သို့ အဆစ်ယိုယွင်းပျက်ဆီးခြင်းသည် အဆစ်ကျွံခြင်း၏ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ကျွန်တော်တို့ ကျောမှာရှိတဲ့ အဆစ်တွေဟာ ၎င်းတို့ကို ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ အရည်တစ်ချို့ဟာ တဖြည်းဖြည်းကုန်ခန်းလာပါတယ်။ အဆစ်ထဲက ချောဆီဟာ အက်ကွဲရာတွေကြားက ထွက်လာပြီး အဆစ်ကို ပေါက်ထွက်ခြင်း သို့ ကွဲထွက်ခြင်းတို့ဖြစ်စေပါတယ်။
Lumbar Disc Syndrome (ကျောရိုးအဆစ်ကျွံခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အကယ်လို့ ကျွံနေတဲ့ အဆစ်ဟာ အာရုံကြောတစ်ခုကို သွားမဖိနေသေးဘူးဆိုလျှင် သင်ဟာခါးနာနေတာက လွဲရင် တခြားဘာလက္ခဏာမှ ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အာရုံကြောတစ်ခုကို သွားဖိနေပြီဆိုလျှင် အောက်ပါလက္ခဏာတွေ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
sciatic nerve အပေါ်ဖိအားသက်ရောက်မှုကြောင့် ကိုက်ခဲမှုဟာ တင်ပါးကနေ ခြေထောက်၊ ခြေချင်းဝတ် ထိခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခါးနာခြင်းနှင့် ခြေထောက်နာခြင်းနှင့် ဒွန်တွဲပြီးလာတတ်ပါတယ်။
ခြေထောက်ကျင်ခြင်း (pins and needles sensation) သို့ ထုံခြင်းကို တင်ပါးကနေ သို့ ဒူးနောက်ကနေစပြီး ပေါင်၊သို့ ခြေချင်းဝတ်ထိ ခံစားရခြင်း
ခြေထောက်တစ်ဖက် သို့ နှစ်ဖက်လုံးရှိ ကြွက်သားများ အားယုတ်ခြင်း
Lumbar Disc Syndrome (ကျောရိုးအဆစ်ကျွံခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသက်၊ ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကတော့ အသက် ၃၅ မှ ၅၀တွင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြသနာဟာ အသက် ၈၀ နောက်ပိုင်းမှာ လက္ခဏာပြခဲပါတယ်။
Gender- ယောင်္ကျားတွေမှာ ခါးဆစ်ရိုးကျွံခြင်းကို မိန်းမတွေမှာထက် ၂ ဆ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ နီကိုတင်းဟာ ကျောရိုးဆစ်တွေဆီ သွေးစီးဆင်းမှုကို နှောင့်နှေးစေခြင်းကြောင့် အဆစ်ယိုယွင်းမှုကို လျှင်မြန်စေပြီး ပြန်လည်ကုစားနိုင်မှုကို နှေင့်နှေးစေပါတယ်။
ကိုက်ခဲမှုဟာ ရှေ့ပြေးသတိပေးလက္ခဏာဖြစ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
Lumbar Herniated Disc – Causehttp://www.webmd.com/back-pain/tc/herniated-disc-cause.Accessed 14 November, 2016
Lumbar Herniated Disc: What You Should Know http://www.spine-
health.com/conditions/herniated-disc/lumbar- herniated-disc- causes-and- risk-factors.Accessed 14 November, 2016
Lumbar Herniated Disc Guide http://www.webmd.com/back-pain/tc/herniated- disc-topic-overview. Accessed 14 November, 2016Lumbar Herniated Disc – Cause http://www.webmd.com/back-pain/tc/herniated- disc-cause.Accessed 14 November, 2016
Lumbar Herniated Disc Guide http://www.webmd.com/back-pain/tc/herniated- disc-topic-overview. Accessed 14 November, 2016